Thundercats | Top Phone Ohere mepere Site | Best UK Mobile cha cha
Otu n'ime n'elu ekwentị ohere mpere saịtị dị na ahịa ugbu a bụ ntụziaka Cha Cha. Ha na-na mmepe n'azụ a oghere egwuregwu na nke ahụ dabeere na a ma ama na eserese na-atọ nke '80s. Thundercats bụ a eserese na-atọ na ọtụtụ ụmụaka bụ onye tolitere na 1980s hụrụ n'anya na-ekiri. Gụọ na mara ma ọ bụrụ na a oghere ndụ ruo aha nke katuunu.
Play n'ebe ọ bụla na nke a n'elu ekwentị ohere mpere saịtị game
Ị nwere ike igwu a n'elu ekwentị ohere mpere saịtị online oghere n'ebe ọ bụla. Thundercats abịa na ise na-esi anwụde na iri atọ paylines na-enye gị ohere na-egwu ya si ọ bụla mobile ngwaọrụ. Nyere i nwere a ufọk ufene njikọ Ịntanetị, ị nwere ike igwu site na ekwentị mkpanaaka na-ma ihe gam akporo ma ọ bụ iOS sistemụ.
Mmepe nke a oghere gbalịrị ha kacha mma weghara kachasi mkpa nke egwuregwu, site na iji a graphic imewe na yiri ihe eserese na-atọ. Player pụrụ ịnụ ụtọ ha egwuregwu na a akaebe nke 40p kwa atụ ogho. Nke a bụ oké ozi ọma n'ihi ala rollers. High rollers nwere ike Wager dị ukwuu dị ka £ 500 kwa atụ ogho.
E nwere akara na-esi anwụde esịnede isi odide si katuunu. Isi akara gụnyere Wily Cat, tiger, Panthro, Cheetara na Lion-O onye ndú nke otu. Cheetara nwekwara okpukpu abụọ dị ka Wild akara.
Cheetara ga-eji dochie ọ bụla ọzọ ihe na hụrụ na-esi anwụde, iji nyere gị aka ọdịda a mmeri. Ndị a isi na akara nwekwara ike kpọghee 10 bonus agba mgbe ị na-egwu egwuregwu a site n'elu ekwentị ohere mpere saịtị gburugburu.
Na-akpali akpali Daashi Atụmatụ
Na nke a na n'elu ekwentị ohere mpere saịtị, ị ga-esi na-egwu ụfọdụ n'ezie na-akpali akpali bonus agba. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere ndị na-esonụ;
A Lion-O bonus gburugburu: Na nke a gburugburu, Cheetara ọhịa akara ga-gụnyere na-esi anwụde. Nke a boosts gị Ohere nke ọdịda Enwee Mmeri.
A Agu Gburugburu: Cheetara ọhịa oyiyi gbasaa na niile ọnọdụ na-ahụ anya na-esi anwụde. Nke a na-emekarị na-eme mgbe a payout e nwetara.
Cheetara gburugburu: Dị ka Cheetara ọhịa akara ala na ukwu 1, ọzọ wilds ga-gụnyere na-esi anwụde. Nke a ga-eweli gị Ohere inweta emeri n'ịgwa.
UK cha cha List Enyele Online – Casino.uk £ 500 na-emekọ!